Garsoorayaal maxkamadeed oo isku khilaafey in Malta qaxooti lagu celiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ilska efter domslut i 17-årings asylfall
Garsoorayaal maxkamadeed oo isku khilaafey in Malta qaxooti lagu celiyo
La daabacay onsdag 16 juni 2010 kl 12.21
Garsoorayaal qaadayey maxkamadda qaxootiga Malmö ayaa maalintii shaley ku kala qeeybsamey go'aan la xiriira in dib loogu celiyo dalka Malta iyo inkale wiil soomaali ah oo 17 jir ah laguna magacaabo Abdikader Abukar Barhadles.
Sharci yaqaankii gudoominayey maxkamadda ayaa go'aankaas looga codbatey ka dib markii ay saddex garsoore isku raaceen in wiilkaas soomaaliga ah dib loogu masaafuriyo dalka Malta,sida uu qorey wargeeyska maalinlaha ah ee Dagens Nyheter.
Abdikader Abukar ayaa go'aankaas ka dib wuxuu walwal ka hayaa mustaqbalkiisa wuxuuna halis ugu jiraa in dib loogu masaafuriyo dalka Malta oo ah dalkii uu markii ugu horeeysey iska dhiibey,iyadoo loo cuskanayo xeeerka Dublin.
Xeerka Dublin ayaa dhigaya in qofka magangalyo doonka ah oo iska dhiiba dal yurub ah, ay tahay in go'aanka la xiriira arrimihiisa qaxootinimo looga gaaro isla dalkaas uu markii hore iska dhiibey laakiin uusan qofkaas qaxootiga ahi xaq u laheeyn in uu dal kaleeto oo yurub ah magangalyo weeydiisto.
Maxkamaddaas qaxootiga ee Malmö ayaa sidoo kale dhawaantaan go'aamo iska hor imaanaya ka gaartey wiil kaloo da' yar oo isna soomaali ah kaas oo dalka Malta ka yimid hal sano iyo bar ka hor .
Maxkamadda ayaa markii hore Haa ku go'aamisey in wiilkaasi qaxootinimo ka dalban karo dalkaan Iswiidhan inkastoo ay markii danbe isla maxkamaddaasi soo saartey go'aan Maya ah oo kii hore ka hor imaanaya.